Fiaraha-monina | Avy amin'ny Linux
Ny vondron'olona rindrambaiko maimaimpoana dia misy mpampiasa sy mpamorona rindrambaiko maimaimpoana, ary koa ireo mpanohana ny hetsiky ny rindrambaiko maimaimpoana. Ity manaraka ity dia lisitra (tsy feno) an'ity vondrom-piarahamonina ity sy ireo fikambanana lehibe mandrafitra azy.
1.7 Wikimedia Arzantina
1.8 Mozilla Arzantina
2.5 Vondrona mpampiasa Linux (Espana)
3.4 Vondrona mpampiasa Linux - Meksika
5.1 Vondron'ny mpampiasa Linux Paraguay
6.2 Linux User Group - Orogoay
7.1 Ubuntu Peroa
7.2 Vondron'ny mpampiasa Linux Linux
8.1 Shily GNU
8.4 Vondrona mpampiasa Linux - Shily
8.5 Vondrom-piarahamonina hafa
10.1 Ubuntu Ekoatera
10.2 Linux User Group - Ekoatera
11.2 Ubuntu Venezoelà
12 Amerika afovoany
12.2 Vondrona mpampiasa Linux - Amerika afovoany
USLA dia mijoro amin'ny "Mpampiasa lozisialy maimaimpoana Arzantina". Azo lazaina fa izy no "renin'ny" fikambanana Free Software rehetra any Arzantina. Izy io dia manambatra ireo vondrona mpampiasa rindrambaiko maimaimpoana sy fikambanana isan-karazany, izay anisany ireo antsipiriany rehetra etsy ambany.
Ny vondrona mpampiasa hafa dia:
CaFeLUG: Vondron'ireo mpampiasa Linux ao amin'ny renivohitra Federal.
GRULIC: Vondron'ireo mpampiasa Cordoba Linux.
Linux Santa Fe: Vondrona mpampiasa Linux ao Santa Fe.
LUGNA: Vondron'ireo mpampiasa Linux ao Neuquén.
gulBAC: Vondron'ireo mpampiasa Linux ao amin'ny ivon'ny Prov. Of Bs. As.
LUGLi: Vondron'ireo mpampiasa lozisialy maimaim-poana ao amin'ny Litoral.
Gugler: Vondrona mpampiasa Entre Ríos.
LUGMen: Vondrona mpampiasa rindrambaiko Mendoza maimaim-poana.
LANUX: Vondrona mpampiasa Lanús Linux.
Ny SOLAR Free Software Argentina Civil Association dia natsangana tamin'ny 2003 avy amin'ny mpikambana ao amin'ny hetsika rindrambaiko malalaka any Arzantina. Ny tanjony dia ny hampiroborobo ny tombony ara-teknolojia, sosialy, etika ary politika amin'ny rindrambaiko maimaimpoana sy ny kolontsaina malalaka, mamorona sehatra organika ho an'ny solontena sy fandrindrana ny isam-batan'olona, ​​ny vondrom-piarahamonina ary ny tetikasa. Ny hetsika lehibe ataony dia mifandraika amin'ny fanaparitahana rindrambaiko Maimaimpoana eo amin'ny sehatry ny fanjakana, amin'ireo fikambanana sosialy ary ireo sehatra sosialy voahilikilika.
Ny SoLAr dia miara-miasa am-pahamendrehana amin'ireo andrim-panjakana nasionaly toa ny INADI (Ivon-toerana nasionaly manohitra ny fanavakavahana, ny Xenophobia ary ny fanavakavaham-bolon-koditra), INTI (Ivon-toeran'ny teknolojia indostrialy), ASLE (Scope of Free Software in the State), monisipaly avy any Arzantina.
Fikambanana sivily tsy mitady tombom-barotra natsangana tao an-tanànan'i Córdoba, Arzantina, i Fundación Vía Libre, izay nanomboka ny taona 2000 ary manandratra ny filamatra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana ary mampihatra izany amin'ny fanaparitahana fahalalana sy kolontsaina malalaka. Anisan'ireo hetsika isan-karazany ny fanaparitahana ny rindrambaiko malalaka amin'ny sehatry ny politika, orinasa, fanabeazana ary sosialy. Ny iray amin'ireo laharam-pahamehan'ny asany dia ny fifandraisana amin'ny gazety1 sy ny fanaparitahana fitaovana fanentanana momba ny olana atrehiny.
Ny Chambre Arzantina an'ny Orinasa lozisialy maimaim-poana. Vondron'orinasa marina (matihanina tsy miankina –monotributistas manokana- tsy tafiditra ao anatin'ny lalàna CAdESoL) miorina ao amin'ny Repoblika Arzantina ary manolo-tena amin'ny tanjon'ny CAdESoL sy ny maodelin'ny fandraharahana rindrambaiko maimaimpoana. Ho ampahany, ny orinasa dia tsy maintsy eken'ny filankevi-pitantanana.
Gleducar dia tetikasa fanabeazana maimaimpoana nipoitra tany Arzantina tamin'ny taona 2002. Ankoatr'izay dia fikambanana sivily miasa amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny haitao.
Gleducar dia vondrom-piarahamonina tsy miankina iray izay misy mpampianatra, mpianatra ary mpikatroka mafàna fo amin'ny fanabeazana mifandraika amin'ny fahalianana iraisana amin'ny asa iraisana, ny fananganana fiaraha-miasa fahalalana ary ny fizarana izany maimaimpoana.
Ny tetikasa dia miasa manodidina ny lohahevitra maro samihafa toy ny fahalalana maimaimpoana, fanabeazana malaza, fanabeazana marindrano, fianarana fiaraha-miasa, teknolojia maimaimpoana vaovao ary mampiroborobo ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana any an-tsekoly ho maodely pedagojika sy teknika, manana ny tanjony faratampony fanovana ny paradigma amin'ny famokarana, ny fananganana ary ny fanaparitahana ny atiny fanabeazana.
Izy io dia mandrafitra vondrom-panabeazana mandamina tena, natsangana ho ONG (fikambanana sivily) izay mamaly ny tombontsoa sy ny tanjon'ny fiarahamonina.
BuenosAiresLibre, fantatra ihany koa amin'ny hoe BAL, dia vondrona natokana ho amin'ny fampandrosoana sy fitazonana tambajotra nomerika ao Buenos Aires (Arzantina) sy ny manodidina azy amin'ny alàlan'ny teknolojia tsy misy tariby (802.11b / g). Izy io dia manana node 500 mahery izay mampita vaovao amin'ny hafainganam-pandeha.
Ny tanjon'ny BuenosAiresLibre dia ny handamina tambajotram-baovao, maimaimpoana ary vondrom-piarahamonina ao an-tanànan'i Buenos Aires sy ny manodidina azy ho mpanelanelana maimaim-poana hanolotra atiny, ankoatry ny fampiharana hafa amin'ny fomban'ny vondrom-piarahamonina. Anisan'ireo atiny hafa, ahitana an'i Wikipedia amin'ny teny espaniola ilay tambajotra. Ny fanitarana ny tamba-jotra dia manampy amin'ny fanaparitahana sy ny hetsika fanazaran-tena, izay ampianaran'izy ireo ny fomba fanangonana antennas misy singa an-trano. BuenosAiresLibre dia mampivelatra ity tambajotra ity amin'ny alàlan'ny fampiharana rindrambaiko maimaimpoana
Niorina tamin'ny 1er. Septambra 2007, Wikimedia Argentina no toko eo an-toerana an'ny Wikimedia Foundation. Izy io dia miasa amin'ny fanaparitahana, fampiroboroboana ary fampiroboroboana ireo loharanom-pahalalana maimaimpoana, indrindra amin'ny fanaparitahana ireo tetik'asa mifandraika amin'ny Wikimedia toy ny Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikinews, sns. Tamin'ny 2009, izy no vondrona niandraikitra ny fandrindrana ny Wikimanía 2009 tao Buenos Aires.
Mozilla Argentina no vondrona manaparitaka ny tetik'asa Mozilla Foundation any Arzantina. Manokan-tena manokana izy ireo amin'ny fanaparitahana ny fampiasana programa maimaimpoana novokarin'i Mozilla tamin'ny alàlan'ny fandaminana sy ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika samihafa.
Python Argentina dia vondrona mpanentana sy mpamorona ny fiteny fandaharana Python any Arzantina. Ny asany dia misy ny fanaparitahana amin'ny alàlan'ny lahateny sy kaonferansa, ary koa ny fampandrosoana ny tetikasa miorina amin'ny Python miaraka amin'i PyGame na CDPedia, kinova Wikipedia amin'ny teny espaniola amin'ny DVD.
Uuntu-ar dia vondron'ny mpampiasa Ubuntu, monina any Arzantina, natokana amin'ny fifanakalozana traikefa sy fizarana fahalalana momba ity rafitra ity.
Ny fikasany dia ny hanaparitaka ny tombotsoan'ny Ubuntu amin'ny sehatry ny fandraisana anjara, izay andraisan'ny mpampiasa rehetra fanatsarana ity rafitra fiasa mahafinaritra ity. Ary amin'ny tranokalan'izy ireo dia ho hitanao ireo fitaovana ilaina hanombohana amin'ny Ubuntu, hamaha olana na hanakalo hevitra fotsiny.
Ny vondrom-piarahamonina GNU Spain. Ao no ahitanao loharanom-baovao marobe momba ny Tetikasa GNU sy ny hetsiky ny rindrambaiko maimaimpoana: fahazoan-dàlana, izay ahitana sy misintona rindrambaiko, antontan-taratasy, filozofia, vaovao ary vondrom-piarahamonina GNU.
Ny tanjon'ny National Federation of Free Software Company ASOLIF (Federated Free Software Associations) dia ny hiaro sy hampiroborobo ny tombotsoan'ny fikambanan-draharaha misahana rindrambaiko maimaimpoana eo amin'ny tsenan'ny Teknolojia sy serivisy, amin'ny alàlan'ny taranaka sy / na ny fanohanan'ny tetikasa, ary koa ny fandaminana ny fandraisana andraikitra hitrandrahana ny maodelin'ny fandraharahana Rindrambaiko Maimaimpoana, hahatratrarana ny famokarana harena amin'ny fomba tompon'andraikitra.
Niorina tamin'ny fiandohan'ny taona 2008, ASOLIF androany dia manangona orinasa maherin'ny 150 nozaraina tamin'ny fikambanan'ny faritra 8, izay mahatonga azy io ho lohalaharana amin'ny sehatry ny sehatry ny fandraharahana rindrambaiko malalaka any Espana.
CENATIC dia State Public Foundation, natolotry ny Minisiteran'ny Indostria, ny fizahan-tany ary ny varotra (amin'ny alàlan'ny Sekretariam-pifandraisan-davitra sy ho an'ny Fikambanana fampahalalam-baovao ary ny orinasam-panjakana Red.es) ary ny Junta de Extremadura, ny Birao Mpiambina azy miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina mahaleo tena ao Andalusia, Asturias, Aragon, Cantabria, Catalonia, ny Nosy Balearic, ny Basque Country ary ny Xunta de Galicia. Ireo orinasa Atos Origin, Telefónica ary Gpex dia ao anatin'ny biraon'ny CENATIC ihany koa.
CENATIC no hany tetikady stratejika an'ny Governemanta Espana hampiroborobo ny fahalalana sy ny fampiasana lozisialy misokatra amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiarahamonina.
Ny fiantsoana ny Fondation dia ny fametrahana ny tenany ho ivon-toerana manatsara ny firenena, miaraka amina projet international na any Eropa na any Amerika Latina.
Vondron'ireo mpampiasa Ubuntu izy, miorina ao Mexico, natokana amin'ny fifanakalozana traikefa sy fizarana fahalalana momba ity rafitra ity mifototra amin'ny debian GNU / Linux.
Vondrona mpampiasa Linux (Espana)
AsturLinux: Vondron'ireo mpampiasa Asturian Linux.
AUGCYL: Vondron'ireo mpampiasa Castilla y Leon.
BULMA: Mpampiasa Linux manomboka amin'ny Mallorca sy ny manodidina.
GLUG: Vondron'ireo mpampiasa Linux an'i Galicia.
GPUL-CLUG: Vondrona Mpampiasa sy Mpandahatra Linux - Vondrona mpampiasa Coruña Linux.
GUL (UCRM): Vondron'ny mpampiasa ao amin'ny Oniversite Carlos III, Madrid.
GULIKA: Vondron'ireo mpampiasa Linux ao amin'ny Nosy Canary.
HispaLinux: Fikambanan'ny mpampiasa Linux Espaniôla.
IndaLitux: Vondron'ireo mpampiasa Almeria Linux.
lilo: Linuxeros Locos - University of Alcalá de Henares.
VALUX: Fikambanan'ny mpampiasa Linux ao amin'ny fiarahamonina Valencien.
Ny vondrom-piarahamonina GNU Mexico. Ao no ahitanao loharanom-baovao marobe momba ny Tetikasa GNU sy ny hetsiky ny rindrambaiko maimaimpoana: fahazoan-dàlana, izay ahitana sy misintona rindrambaiko, antontan-taratasy, filozofia, vaovao ary vondrom-piarahamonina GNU.
Mozilla Mexico no vondrona fanapariahana ireo tetik'asa Mozilla Foundation any Mexico. Manokan-tena manokana izy ireo amin'ny fanaparitahana ny fampiasana programa maimaimpoana novokarin'i Mozilla tamin'ny alàlan'ny fandaminana sy ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika samihafa.
Vondron'ireo mpampiasa Ubuntu izy, miorina ao Mexico, natokana amin'ny fifanakalozana traikefa sy fizarana fahalalana momba ity rafitra miasa ity.
Vondrona mpampiasa Linux - Meksika
Izy io dia mampivondrona ireo oniversite, mpandraharaha, governemanta, vondrona mpampiasa, mpijirika, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ary mpikatroka ho an'ny fahalalahana fahalalana. Ny tanjony dia ny hampiroborobo ny fampiasana sy fampandrosoana ny rindrambaiko maimaimpoana ho solon'ny fahalalahana ara-toekarena sy ara-teknolojia.
Vondron'ny mpampiasa Linux Paraguay
Izy io dia misy forum, lisitry ny mailaka, fitaratra rindrambaiko maimaimpoana (fizarana amin'ny .iso sy fanavaozana), fampiantranoana ireo tetikasam-pirenena, fitaratry ny tranokala fanoratana (tldp.org, lucas.es), ary mandrindra Linux InstallFests karakarain'ny fikambanana isan-karazany . Ho fanampin'izay, manana wiki ho an'ny tetikasa sy antontan-taratasy nalefan'ny mpampiasa izy.
Vondron'ireo mpampiasa Ubuntu izy, miorina ao Uruguay, natokana amin'ny fifanakalozana traikefa sy fizarana fahalalana momba ity rafitra fiasa ity.
Linux User Group - Orogoay
Vondronà mpampiasa Orogoaiana an'ny rafitra fiasa GNU / Linux ho an'ny solosaina izy. Ny tanjona kendren'ny vondrona dia ny fanaparitahana ny fampiasana sy ny filamatra an'ny GNU / Linux sy ny lozisialy maimaim-poana ary ho toerana iray hifanakalozana fahalalana tsy ara-teknika ihany, fa koa ny hevitra momba ny filozofia mitazona ny lozisialy malalaka, ny kaody Open Source sy ny toy izany.
Vondron'ireo mpampiasa Ubuntu izy, miorina ao Però, natokana amin'ny fifanakalozana traikefa sy fizarana fahalalana momba ity rafitra miasa ity.
Vondron'ny mpampiasa Linux Linux
Ny tanjon'ny vondrona dia ny fanaparitahana ny rafitra fiasa Linux, hampiroborobo ny fampiasana sy ny fampianarana; ary koa ny fanohanana ny fampandrosoana ny OpenSource ao amin'ny firenena.
Ny PLUG dia tsy mikatsaka tanjona ara-toekarena, fa hanompo ny vondrom-piarahamonina Linux any Peroa fotsiny. Ny fandraisana anjara ao anatin'ny vondrona dia misokatra ho an'ny olona sy andrim-panjakana rehetra vonona hiara-hiasa amin'ny tanjona sy tanjon'ny vondrona.
Ny vondrom-piarahamonina GNU Chile. Ao no ahitanao loharanom-baovao marobe momba ny Tetikasa GNU sy ny hetsiky ny rindrambaiko maimaimpoana: fahazoan-dàlana, izay ahitana sy misintona rindrambaiko, antontan-taratasy, filozofia, vaovao ary vondrom-piarahamonina GNU.
Vondron'ireo mpampiasa Ubuntu, monina ao Shily izy, natokana hifanakalo traikefa sy hizara fahalalana momba ity rafitra fiasa ity.
Mozilla Mexico no vondrona manaparitaka ny tetik'asa Mozilla Foundation any Chile. Manokan-tena manokana izy ireo amin'ny fanaparitahana ny fampiasana programa maimaimpoana novokarin'i Mozilla tamin'ny alàlan'ny fandaminana sy ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika samihafa.
Vondrona mpampiasa Linux - Shily
AntofaLinux: Vondron'ireo mpampiasa Linux an'ny Antofagasta.
UCENTUX: Vondron'ireo mpampiasa Linux ao amin'ny Oniversite afovoany, Faritra Metropolitan.
CDSL: Ivotoerana Diffusion Rindrambaiko Maimaimpoana, Santiago.
GULIX: Vondron'ireo mpampiasa Linux ao amin'ny Faritra IX.
GNUAP: Vondron'ny mpampiasa Linux ao amin'ny Oniversite Arturo Prat, Victoria.
GULIPM: Vondron'ireo mpampiasa Linux an'ny Puerto Montt.
Distros: Chile Chili, Arch Chile.
Tontolo manodidina ny Desktop: Silia GNOME, KDE Chile.
Ny Vondrona Mpampiasa Teknolojia Maimaimpoana (Cuba), fantatra amin'ny anarana hoe GUTL, dia vondrom-piarahamonin'ireo mpankafy OpenSource sy Free Software amin'ny ankapobeny.
Mozilla Community ao Kiobà. Niorina sy notarihin'ny mpikambana ao amin'ny University of Computer Science of Cuba.
Vondron'ireo mpampiasa Ubuntu izy, miorina ao Ekoatera, natokana amin'ny fifanakalozana traikefa sy fizarana fahalalana momba ity rafitra fiasa ity.
Linux User Group - Ekoatera
Portal natokana hanaparitahana ny fampiasana sy ny filamatra an'ny GNU / Linux ary ny lozisialy maimaim-poana, ary ny fanomezana serivisy sy fampahalalana mifandraika amin'ny rafitra GNU / Linux.
Ny Vondron'ireo mpampiasa GNU ao Venezoela dia vondrona iray mifantoka amin'ny fanomezana sy fitoriana ny filozofia sy ny idealisma ny tetikasa GNU sy ny FSF (Free Software Foundation) any Venezoela amin'ny alàlan'ny fampivoarana, sy ny fampiasana, ny programa, ny famoahana ary ny antontan-taratasy miorina amin'ny rindrambaiko afaka.
Vondron'ireo mpampiasa Ubuntu izy, miorina ao Venezoela, natokana amin'ny fifanakalozana traikefa sy fizarana fahalalana momba ity rafitra ity mifototra amin'ny debian GNU / Linux.
Ny Vondrona Mpampiasa Venezoela Linux (VELUG) dia fikambanana iray izay manolotra fidirana amin'ny fampahalalana marobe mifandraika amin'ny rafitra fiasa GNU / Linux sy Free Software.
Ireo mpikambana ao aminay dia mamokatra fitaovana betsaka ao amin'ny lisitra mailaka. Ny fitaovana teknika rehetra, ny valin'ny fanontaniana sy valiny natakalo tao amin'ny VELUG, dia hita ao amin'ny arisiva-n'ny lisitr'ireo mailaka.
Ny Front Revolutionary of Free Technologies (FRTL) dia vondron'olona elatra ankavia, miompana amin'ny fanaparitahana, fampiroboroboana ary fampiasana teknolojia maimaim-poana amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny, amin'ny fikatsahana hizara sy handrisihana ny fahalalana manafaka sy ny fandraisana anjara amin'ny fiandrianam-pirenena teknolojia ankinina. ao amin'ny Drafitry ny Tanindrazana amin'ny fomba fijery mahaolona eo amin'ny sehatry ny sosialista tamin'ny taonjato XXI.
Ny vondron'olona Free Software Central America (SLCA) dia teboka fihaonana ho an'ireo vondrona voarindra samihafa izay miasa amin'ny fampandrosoana sy fanaparitahana rindrambaiko maimaim-poana any Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica ary Panama.
Niara-nivory izahay mba hifandray, hifandray hery, hizara fahalalana sy traikefa; ary ambonin'izany rehetra izany, hampiroborobo ny fiovana amin'ny fiaraha-monina misy ny fahalalahan'ny rindrambaiko mandray anjara amin'ny famoronana sy fizarana fahalalana malalaka.
Vondrona mpampiasa Linux - Amerika afovoany
GULNI: Vondron'ireo mpampiasa Linux ao Nikaragua
GULCR: Vondron'ireo mpampiasa Linux any Costa Rica
GUUG: Vondron'ireo mpampiasa Unix any Goatemalà
SVLinux: Vondron'ireo mpampiasa Linux any El Salvador
Ny Free Software Foundation dia renin'ny fikambanana FREE Free Software ary noforonin'i Richard M. Stallman hamatsy vola sy hanohana ny tetikasa GNU. Amin'izao fotoana izao, apetrany eo am-pelatanan'ny mpiserasera Free serivisy serivisy marobe ho an'ny fiarahamonina hivoatra sy hamokatra.
Misy fikambanana hafa mifandraika amin'ny Free Software Foundation, izay mizara tanjona iray ihany ary manatanteraka ny asany amin'ny sehatra eo an-toerana na any kaontinantaly. Toy izany ny tranga Free Software Foundation Europe, la America Software Latin Foundation ary ny Free Software Foundation India.
Ireo fikambanana eo an-toerana ireo dia manohana ny Tetikasa GNU amin'ny fomba mitovy amin'ny an'ny Free Software Foundation.
Fikambanana tsy mitady tombom-barotra miorina any Etazonia izy, izay ny asany lehibe indrindra dia ny fandrindrana ny Andron'ny fahalalahan'ny rindrambaiko manerantany. Ny mpiasa rehetra dia manao asa an-tsitrapo amin'ny fotoanany.
OFSET dia fikambanana tsy mitady tombom-barotra ary ny tanjony dia ny hampiroborobo ny fampandrosoana rindrambaiko maimaimpoana miompana amin'ny rafi-panabeazana sy ny fampianarana amin'ny ankapobeny. OFSET dia voasoratra anarana any Frantsa fa fikambanana manana kolontsaina marobe miaraka amin'ireo mpikambana manerana an'izao tontolo izao.
Fantatrao ve misy fikambanana sy / na fiarahamonina manan-danja mifandraika amin'ny rindrambaiko maimaimpoana izay tsy voalaza? Alefaso aminay ny fangatahana.